Ireo Palestiniana Mpanao Gazety Indray No Lasa Lasibatra Voalohany Tamin’ilay Lalàna Hiadiana Amin’ny Heloka Bevava Atao Amin’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Aogositra 2017 6:19 GMT
Vakio amin'ny teny Português, English, Español, عربي, русский, Italiano, Ελληνικά, English
Sary petaka iray an'ireo mpanao gazety nosamborin'ny Tomponandraikitra Palestiniana. Maribolana mivaky toy izao: “tsy heloka bevava ny asa fanaovana gazety” ary “aiza ireo mpanao gazety”. Loharano: Ouds News Network teo amin'ny Twitter
Herinandro vitsivitsy monja taorian'ny nankatoavana ny lalàna mifehy ny heloka bevava anaty aterineto, nenjehin'ny Tomponandraikitra Palestiniana (PA) ireo mpanao gazety dimy nolazainy fa “nanaporitsaka vaovao ho an'ireo vondrona mpanohitra.”
Tsy notondroin'ny governemanta ireo vondrona mpanohitra voalaza, fa efatra amin'ireo mpanao gazety nosamborina no niasa niaraka tamin'ny media mifandray amin'ny Hamas, mpifaninana politika amin'ny antoko Fatah eo amin'ny fitondrana ao Amoron'i Jordàna.
Ny harivan'ny 8 Aogositra lasa teo, ireo mpiasan'ny Sampam-pitsikilovan'ny Palestiniana no nisambotra ireo mpanao gazety dimy avy ao amin'ireo tanàna samihafa tao Amoron'i Jordàna ireo. Nataon'ireo hery fiarovana savahao ny tranon'izy ireo sy ny toeram-piasàny, ary nogiazan'izy ireo avokoa ireo finday sy ireo solosaina.
Anisan'ireo mpanao gazety ireo i Mamdouh Hamamrah avy ao Betlehema sy Ahmed Halayqah avy ao Hebrôna, samy mpanao gazety ao amin'ny fantsona Fahitalavitra Al-Quds; Tariq Abu Zaid avy amin'ny Nablus, mpanao gazety iray ao amin'ny fantsona fahitalavitra al-Aqsa; Amer Abu Arafah avy Hebrôna, mpanao gazety iray ao amin'ny Shehab News Agency; ary Qutaibah Qasem avy ao Betlehema
Voasambotra izy ireo raha vao herinandro monja no nahavitan'ny Filoham-pirenena Mahmoud Abbas sonia, ilay lalàna faran'izay nahabe adihevitra momba ny heloka bevava atao amin'ny aterineto, izay manakantsakana ny fahalalahan'ireo Palestiniana maneho hevitra amin'ny tambajotra, amin'ny alalan'ny fampiasana teny heverina ho mandrotika ny “firindran'ny fiarahamonina”, “fiarovana ny fanjakana” ary ny “filaminam-bahoaka.” Raha toa ny biraon'ny Fampanoavana nandà tany am-boalohany ny fisian'ny fifandraisana eo amin'ilay lalàna vaovao sy ny hetsika fisamborana, taty aoriana kely dia noresahanya ny andininy faha-20 amin'ilay lalàna mba ho fanamarinana ny fisamborana ireo mpanao gazety.
Voalazan'ny andininy faha-20 fa hogadraina mandritra ny iray taona na hohelohina handoa onitra 1.400 dolara amerikàna izay olona rehetra mampiasa ireo teknolojia fampahalalam-baovao mba hamoahana vaovao “manohintohina ny fiarovana ny fanjakana, ny filaminam-bahoaka na ny fiarovana anatiny na ivelan'ny fanjakana”.
Ny Fitsaràna Fampihavanana dia namoaka didy ho fitazonana ireo mpanao gazety mandritra ny andro maromaro tsy voafetra, nefa avy eo, ny 15 Aogositra, navoaka indray izy ireo, tsy nasiana fanamelohana, rehefa nandoa onitra. Mino ny fianakavian'ireo voasambotra fa valifaty nasesiky ny politika ataon'ny governemanta ny fisamborana ireo mpanao gazety tamin'ny 8 Jona teo toa an'i Fouad Jaradeh, mpanao gazety iray avy amin'ny fahitalavitra ofisialy PA, izay voasambotr'ireo manampahefana an'i Hamas tao Gaza.
Ny famaizana natao tamin'ireo mpanao gazety dia niteraka tabataba tamin'ireo Palestiniana mpanao gazety sy mpikatroka izay nanao fanentanana iray tany anatin'ireo vovonana media sosialy, teo ambany tenifototra amin'ny fiteny Arabo #وين_الصحفيين (aiza ireo mpanao gazety) sy #الصحافة_ليست_جريم (‘tsy heloka bevava ny asa fanaovana gazety’), mba hangatahana ny famotsorana tsy misy hatak'andro ireo mpanao gazety, ary hiampangàna ny fampiasàn'ny PA ny lalàna mifehy ny heloka bevava atao amin'ny aterineto mba hamoretana ny fahalalahan'ny media.
قانون الجرائم الإلكترونية الذي طبقته السلطة على الصحفيين هدفه إسكات كل صوت معارض للسلطة أو محرض على مقاومة الاحتلال#الصحافة_ليست_جريمة
— Lama Khater لمى خاطر (@lama_khater) August 12, 2017
Ny tanjon'ilay lalàna mifehy ny heloka bevava atao amin'ny aterineto, izay nampiharin'ny tomponandraikitra tamin'ireo mpanao gazety, dia ny mba hampanginana ireo feo rehetra tsy hanohitra ny governemanta na hihantsy fanoherana hanohitra ny fibodoana #Tsy heloka bevava_ny asa fanaovana_gazety
تقييد حرية الصحافة واعتقال الصحفيين تحت قانون فضفاض جريمة.#قانون_الجرائم_جريمة #الصحافة_ليست_جريمة
— مجد عرندس (@majdarandas) August 12, 2017
Heloka bevava ny faneriterena ny asa fanaovana gazety sy ny fisamborana ireo mpanao gazety amin'ny fampiasàna lalàna manjavozavo #cybercrime_law_is_a_crime #Tsy heloka bevava_ny asa fanaovana_gazety
قانون الجرائم الالكترونیة یلزم الصحفي وضع قفل على فمه وقلمه#الصحافة_لیست_جریمة#قانون_الجرائم_جریمة pic.twitter.com/4yAJ7QZTp4
— سجى زهير#غزة (@sajazuhair9) August 12, 2017
Mandidy ireo mpanao gazety hamehy ny vavany ilay lalàna momba ny heloka bevava atao amin'ny aterineto
Amin'ny fitondràna sorabaventy mivaky hoe: “tsy heloka bevava ny asa fanaovana gazety”, ny 12 Aogositra, nanao fihetsiketsehana tao Ramallah ny fianakavian'ireo mpanao gazety voasambotra sy ireo mpikatroka mafana fo hafa, hanoherana ny tsindry ataon'ny PA amin'ny media sy ny fahalalaham-bahoaka ary ny fandaniany ilay lalàna vaovao momba ny heloka bevava amin'ny aterineto.